FAKAFAKA: manomboka sahady ny doka vilana ! | NewsMada
Par Taratra sur 27/07/2021
… Tsy diso ny mpanoratra fa tena “doka vilana” mihitsy io fa tsy “dika vilana”. Hita sy heno etsy sy eroa sahady (indrindra fa any amin’ny haino vaky jery sy any amina tambajotran-tserasera samihafa) ireo karazana dokam-barotra manindraindra ny fiteny vahiny. “Fampianarana atao amin’ny fiteny frantsay”, na “Amin’ny teny frantsay ny fampianarana”. Hita koa ny hoe: “Amin’ny teny frantsay sy anglisy ny fampianarana”! Fa angaha tena fady sy miteraka loza amin’antambo mihitsy ny fampianarana ny taranaka malagasy amin’ny fitenin-drazany? Sanatria, tahaka ny manozon-tena ny Malagasy amin’ny tranga maharikoriko tahaka izao. Nomen’Ilay Nahary ny fiteny malagasy ny Malagasy ka nahoana no tsy ampiasaina hanabeazana ny menaky ny ainy, fa aleo mampiasa ny an’ny hafa? Mahavariana tanteraka!
“Tsy misy ary tsy hisy mihitsy izany firenena handroso amin’ny fampiasana ny tenin’ny hafa izany”, hoy ny fanambarana nivoaka teo anivon’ny sampandraharahan’ny Firenena mikambana misahana ny fanabeazana sy ny kolontsaina (Unesco). Mbola tena voazanaka sy faran’izay mora zanahina ny toe-tsain’ny Malagasy sasany. Ao ireo mihevitra fa “ambony” kokoa noho ny any amin’ireo sekoly mampiasa ny fiteny malagasy ny zanany raha mianatra any amin’ireny sekoly mampianatra amin’ny fiteny vahiny ireny!
Ny hanatsoaka sy hanala hatrany ifotony ny fitiavan-tanindrazana ao amin’ny Malagasy ka tsy hahalalany intsony ny momba azy no tanjon’ny mpanjanaka. Tsy mety eo imason’izao tontolo izao anefa ny haneho izany an-karihary. Noho izany, tsy maintsy ampiasaina ny doka vilana, ny fita-bitro, sns. Ireny ilay lazain’ny mpikaroka hoe: “fanjanahana amin’ny endriny vaovao”… “Ny hitsikitsika tsy mandihindihy foana fa ao raha”, hoy ny fahendrena malagasy!